Batanidza kuUtah Pride Board Kunyorera Peji
Iyo Utah Pride Center Bhodhi revatungamiriri inotangisa Yaro Sarudzo Komiti yega yega kudonha kwegore rinouya rekarenda. Chero zvikumbiro zvakaunzwa izvo zvisiri panguva yeKuvhura Kufona kunoitwa neKusarudza Komiti zvichachengetwa uye zvichapihwa kune Selection Committee pakutanga kwayo.
Zvikumbiro zveUtah Pride Center Board zvino zvavharirwa 2021
Iyo Utah Pride Center Board yeVatungamiriri inoitisa kusimudzira chiono neUtah Pride Center uye chinangwa, kusimbisa zvinangwa zvenguva yakareba, kusimudzira mari, uye kuvimbisa kuzvidavirira kwemari. Nhengo dzeBhodi dziri kuvandudzwa sevatungamiriri kuburikidza nekubata kwavo munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunharaunda pamwe nemubatanidzwa wenharaunda.
ChrisJensen@utahpridecenter.org Chris Jensen mutengesi, muzvinabhizimusi, uye muridzi webhizinesi diki. Asati aita basa rake muzvivakwa, Chris akawana ruzivo mukutonga kwemakambani, mabhajeti nemari. Read More
uye hombe-pamwero mashandiro manejimendi manejimendi. Sekutanga chizvarwa koreji mudzidzi, Chris akawana Bachelor yeSainzi mune bhizinesi manejimendi uye parizvino ari kupedzisa Master's Degree muHistoric Preservation. Chris akaberekerwa muUtah uye akakurira mumaruwa Oklahoma, kwaakadzidza kwekutanga matambudziko anosangana nevanhu veLBBTQ vasina nharaunda dzakasiyana uye dzakashinga nharaunda. Munguva yake yekusarudzika, Chris anofarira kufamba, kudzidza zvivakwa, kuvaka zvakare mota dzekare, uye kupedza nguva nemurume wake (anonzi Chris) uye vaviri vake Corgis (Blanche naClayton).
Michael Iwasaki akagamuchira degree rake reBachelor of Science mu Psychology kubva kuYunivhesiti yeUtah, achiteverwa nedhigirii rake reJuris Doctor kubva kuSJ Quinney College Read More
weMutemo. Iye zvino arikushandira State of Utah kunyora nekutaurirana nezvekutenga zvibvumirano.
Michael ane shungu nebasa renharaunda, achinge ashandira kuUtah Minority Association Board, Utah State Bar Young Lawyers Division Fit2Practice Committee, Uye Justice yeVese Community Center Inoenderera Yezvemitemo Komiti, uye Multicultural Engagement yeUtah kubatana kwevanhu mubatanidzwa. Parizvino anoshanda seMubati-Mutungamiri weSalt Lake Chitsauko cheJapan American Citizens League.
Munguva yake yekusarudzika, anofarira kufamba, kutarisa maresitorendi matsva, uye kubata pane yake Netflix yekutarisa.
Michael anofara kujoina iyo Utah Pride Center Board nekuti anoziva uye anokoshesa zvikuru kukosha kweiyo Pride Center uye nemasevhisi mazhinji aanopa. Tariro yake ndeyekuti Pride Center ichaenderera ichive mucherechedzo wekuchengetedzwa nekubatanidzwa kwemakore anouya.
Executive Member paGuru
GloriaCastaneda@utahpridecenter.org Gloria Castaneda parizvino ari 2-1-1 Senior Resource Nyanzvi kuUnited Way yeSalt Lake (UWSL). Chirongwa che2-1-1 iri ruzivo rwepasirese uye nzira yekutumira ye Read More
hutano uye sevhisi masevhisi achibatanidza vanhu uye mhuri kune zvinodikanwa zviwanikwa nefoni, chat, email uye zvinyorwa. Gloria anobatsira pakuronga pamwe nekuchengetedza dhatabhesi ya2-1-1 ukuwo vachitsigira varidzi vebasa nekuvabatsira kubatana nevatengi vavo. Basa rake razvino muUWSL's 2-1-1 Dhipatimendi rinotarisa pakuramba uchivandudza uye pakuona kwedata nekushandisa. Mumakore ake masere aine chirongwa cheUWSL's 8-2-1, akashanda mune mamwe masimba uye anonzwa rombo rakanaka kuenzanisa dzidzo yake pamwe nechido chekuona kuti vana nenharaunda dzakatambura vanowana chikafu, hutano, dzidzo, uye kuchengetedzeka; pamwe nekuwana kune zvine musoro dunhu renharaunda nevanopa rubatsiro rwevanhu. Gloria ane Bachelor's degree muEconomics kubva kuWestminster College, uye Master's muInternational Affairs uye Global Enterprise nekusimbisa mumaNGO. Kutyaira kwake kwekuita munharaunda uye kudzidza kwakamutungamira kuti ave chikamu cheUtah Pride Center Bhodhi revatungamiriri.
TimJohns@utahpridecenter.org Tim Johns, Mutevedzeri weMutungamiriri weDziviriro yeParenthood Association yeUtah, akapedza degree rake remasters kubva kuNew York University mune isingabatsiri Read More
manejimendi. Tim akatanga basa rake rekutsvaga mari kumasangano akasiyana siyana ehunyanzvi uye akashanda kumasangano ane mukurumbira seThe New 42nd Street, Orpheus Chamber Orchestra, International Creative Management. Tim anga aine Planned Parenthood kweanoda kusvika makore gumi, achitanga neCentral Ohio yakabatana uye parizvino anga aine mubatanidzwa weUtah kwemakore matatu. Pasi pehutongi hwaTim, Planned Parenthood Association yeUtah yakagashira iyo Winston E. Forrest, Jr. mubairo wekugona mukubata mari kubva kuPlanned Parenthood Federation of America.
Ariel Malan (iye / iye), akawana dhigirii raMasters muhutano hweHurumende kubva kuYunivhesiti yeUtah muna 2018. Kwemakore anopfuura gumi, kuda kwaAriel kwave Read More
yanga ichishanda nenharaunda dzeLBBTQ + kuburikidza nekukurudzira, dzidzo, uye kutsvagisa. Ariel parizvino ndiye Mudzidzisi weChirongwa cheUniversity yeUtah Transgender Health Chirongwa. Yake yekutanga kuraira kwave kubvunza nezve maitiro akanakisa, kubva kwaari chirongwa chetsananguro paServing Transgender uye Gender Diverse Varwere muhutano Hwezvigadziriso kune rake razvino basa neUniversity Hospital kudomwa neiyo Healthcare Equality Index kuburikidza neHuman Rights Campaign. Ariel anozivisa semurungu, queer, polyamorous, cisgender mukadzi uye anovavarira kushandisa rombo rake nekupa nzvimbo uye nekuwedzera mazwi akasarudzika munzvimbo dzese.
CandicePitcher@utahpridecenter.org Candice Pitcher gweta mubhengi uye mubato rezvemari. Candice akatanga basa rake kuJones Waldo Holbrook & McDonough, Read More
uko kwaakaraira mabhangi, asiri emabhangi uye mamwe makambani ari mukati meindasitiri yemabasa ezvemari maererano nemitemo inotevedzwa uye manejimendi manejimendi. Candice akashanda sezano rekuteerera uye rairo yakajairika kumafemu akati wandei epakati emari emari. Iye parizvino ari mukuru wezano rehombe hombe imba yekudyara mari. Candice akapedza kudzidza kuYunivhesiti yeUtah (Go Utes!) Uye akaenderera mberi nekumugamuchira iye Juris Doctorate kubva kuYunivhesiti yeArizona (Bear Down!). Iye anogara muSalt Lake City nemukadzi wake, Colleen, vanasikana vavo mapatya, uye nevana vavo vatatu vemvere.
Biography kuuya munguva pfupi!
Chance Pennington ndiye arizvino Boka Human Resources Manager Read More
ye Enterprise Holdings (Enterprise, Alamo, & National rental mota mhando) muUtah, Southern Idaho, Jackson, WY, uye Ontario OR. Chance parizvino ari mu21 yakestgore nekambani.
Chance akatanga rwendo rwake rweBusiness seManagement muboka reKentucky. Akabata akawanda Daily Rental Management zvinzvimbo kusanganisira Area Manager muCincinnati, OH. Aive akabudirira Bhizinesi Rental Sales Executive muKentucky uye Talent Development Manager muSt Louis, Nashville, & Cincinnati misika. Chance akashanda seHuman Resources Manager muEast Tennessee (Knoxville, Chattanooga, & Tri-Cities) nebasa rake razvino rakavakirwa muUtah.
Chance yakave nekutarisa kwakasimba muhurombo muhupenyu hwake hwese. Akabatsira kubata Nashville's Blue Jean Bhora yeKurume yeDimes uye akabatana nebhodhi reMOD muEast Tennessee. Chance yakashanda pamabhodhi maviri ekutanga LGBTQIA + akatarisana - Iyo Brooks Fund muNashville uye Gateway Men's Chorus muSt Louis. Munguva yake muNashville aibata nesimba muNashville LGBT Chamber.
Chance nemurume wake Randy vakatamira kuSalt Lake makore maviri apfuura vachigara munzvimbo yeThe Daybreak yeSouth Jordan nembwa yavo Ranger. Chance parizvino anoshanda bhodhi redu senhengo yeGovernance Committee. Anoshandawo pabhodhi reJunior Achievement yeUtah.
Chance ane BA yake kubva kuMorehead State University uye MA yake kubva kuIndiana University. Anobata zvese SHRM-CP uye PHR zvitupa muHuman Resources profession.
(iye / ivo / ivo)